Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Berrah Mohamed as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Democratic Republic of Algeria to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Hanoi, Vietnam – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Berrah Mohamed as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Democratic Republic of Algeria to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Hanoi, Vietnam
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Berrah Mohamed as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Democratic Republic of Algeria to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Hanoi, Vietnam.
Mr. Berrah Mohamed was born on 16 October 1956. He received Law Degree in 1980, Post-graduation (Law) in 1982 and started the preparation for Ph.D on the concept of international cooperation from 1982-1987. He wasaThird Secretary in the MOFA in 1987. He then served as Second Secretary in charge of Bretton Woods Institutions in 1989. He had been temporarily posted to the Permanent Mission of People’s Democratic Republic of Algeria to the United Nations in New York and represented Algeria in the Fifth Committee in 1990. From 1992 to 1996, he wasaCounsellor in the Algerian Embassy in Brussels. From 2001 to 2005, he also served as Minister Counsellor in Algerian Permanent Mission in Geneva and in Algerian Embassy in Paris. Then he had been appointed as an Ambassador of Algeria to Uzbekistan, Tajikistan and Kirghizia. He is married with three children.
Mr. Berrah Mohamed will serve as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Democratic Republic of Algeria to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Hanoi, Vietnam.
Dated: 16 July 2015
အယ်လ်ဂျီးရီးယားသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဘီရာ မိုဟာမက် အား ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့တွင် အ​ခြေစိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၏ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ သဘောတူပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ဘီရာ မိုဟာမက် ကို ၁၆-၁၀-၁၉၅၆ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားပါသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ် တွင် ဥပဒေဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့လွန်ဥပဒေဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၇ ခုနှစ်အထိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့အတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တတိယအတွင်းဝန် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဘရပ်တန်ဝုဒ် အဖွဲ့အစည်းများ တာဝန်ခံ ဒုတိယအတွင်းဝန် အဖြစ်လည်းကောင်း စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးတွင် ပဉ္စမကော်မတီ၌ ယာယီတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၆ ခုနှစ် အထိ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့ရှိ အယ်လ်ဂျီးရီးယားသံရုံးတွင် သံမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဂျီနီဗာမြို့ရှိ အယ်လ်ဂျီးရီးယား အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးတွင် သံမှူးကြီးအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ ပဲရစ်မြို့ရှိ အယ်လ်ဂျီးရီးယားသံရုံးတွင် သံမှူးကြီးအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်နှင့် ကာဂီဇီယာ(ကာဂျီစတန်) နိုင်ငံများဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး အဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှဒေသတာဝန်ခံ သံမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားသမီး(၃)ဦး ရှိပါသည်။
အယ်လ်ဂျီးရီးယားသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဘီရာ မိုဟာမက် သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့တွင် အ​ခြေစိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အယ်လ်ဂျီးရီးယား သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်။